Cheick Tiote ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ အာဖရိကဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Ivory Coast ဘောလုံးကစားသမားများ Cheick Tiote ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်သိနှောင်းပိုင်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Bull ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; '' မစ္စတာ T က ''။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Cheick Tiote ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ကိုမှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အကောင့်တတ်၏။ analysis ကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြား OFF နှင့် on-အသံနည်းနည်းလူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။ စတင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Cheick Tiote ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -အစောပိုင်းနှစ်များ
Cheick Tiote ငယ်ဘဝဓာတ်ပုံ
နှောင်းပိုင်းတွင် Cheick အစ်ရှ်မေးလ်Tiotéအတွက် 21 ဇွန်လ 1986 ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည် Yamoussoukro, သူ့မိဘများ, နှောင်းပိုင်းက Mr နှင့် Mrs Toite အားဖြင့် Cote d'Ivoire ၏မြို့တော်။ သူ Yamoussoukro အတွက်ဒုက္ခ-ကိုက်, ဆင်းရဲမွဲတေမှု-ဒဏ်ခတ်တော် Shanti မြို့ယုံကြည်ခဲ့သည်။ သူသည်ဤသူသူ့ကိုခိုင်ခံ့စေ၏ယုံကြည်ယျပြောဆိုထားသည်။
သူ့မိဘ၏အသေခံပြီးနောက်, Tiote လုံခြုံမြို့အဖြစ်မှတ်ခဲ့သော Abidjan ၏ဇာတိမြို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသည်။ သူကဘောလုံးဖို့သူ့ကိုဦးဆောင်သောမြို့ဖြစ်သတည်း admited ။
သူကဘိနပ်မပါသောကစားထွက်စတင် လမ်းဘောလုံးကွင်း 10 ၏အသက်အရွယ်မှာ, တရံပိုင်ဆိုင်မဟုတ် ဘွတ်ဖိနပ် သူ 15 ခဲ့ချိန်အထိနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖိနပ်ကိုသုံးနိုင်သည်။
Cheick Tiote ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -မိမိအမရဏ
တနင်္လာနေ့နေ့လယ်တွင်ဇွန်လ 5, 2017 တစ်ခုလုံးကိုဘောလုံးရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထားအိုင်ဗရီကို့စ်ဟောင်းနယူးကာဆယ်ယူနိုက်တက်ကြယ်ပွင့် Cheick Tiote ၏ပပျောက်ရေးသေခြင်းတရားအောက်ပါနက်ရှိုင်းသောထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်စိတ်မသာညည်းတွားသို့လှဲချခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာရောက်ရှိ LifeBogger.com အဆိုပါကြုံတွေ့ Cheick Tiote သည်သူ၏ကလပ်ပေကျင်းလုပ်ငန်းများနှင့်အတူလေ့ကျင့်ရေးအတွက်ပြိုလဲပြီးနောက်အသက် 30 ကွယ်လွန်သွားကြောင်းရှင်းပြသည်။ ဝမ်းနည်းစရာကသူအနိုင်နိုင်ရက်အနည်းငယ်သေခံတော်မူပြီးနောက်အသစ်တခုကလေးငယ်ကိုမျှော်လင့်ခံရဖို့ပြောဆိုပေမယ့်သူအပေါ်လွန်နှင့်သူ၏မသေမှီသုံးခုကလေးတွေကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
Cheick Tiote ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -မိမိအဒဏ်ရာကုသပေးဖို့စုန်းမဆရာဝန်များယုံကြည်ကိုးစားခြင်း
မေးခွန်းတွေအများကြီးသေခံတော်မူကြားနာကတည်းကထမြောက်ကြပြီ။ လိုပဲ ... အဘယျသို့ Cheick Tiote သတ်သနည်း ..
စုန်းမဆရာဝန်များ Cheick Tiote အသတ်ခံရပုံကိုရှင်းပြသောအစီရင်ခံစာများရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကိုသင်နဲ့သူ့ရဲ့သမိုင်းနှင့် ပတ်သက်. ဘာမျှမသိရကြလျှင်သင်ဒီအကြောင်းအံ့အားသင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဒါဟာရက်စက်ခုခံကာကွယ်ကွင်းလယ်လူသည်သူ၏ဘောလုံးဒဏ်ရာကုသပေးဖို့စုန်း-ဆရာဝန်များကယုံကြည်ကိုးစားတဲ့အလေ့အထရှိပါတယ်သတိပြုပါရန်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာသူ့ကိုနာကျင်မှုဖြစ်ပေါ်စေနှင့်သူ၏လှုပ်ရှားမှုကိုကန့်သတ်ထားတဲ့လက်ျာဒူးပေါ်အရည်နှင့်အတူရုန်းကန်ရသောအခါပယောဂဆရာတစ်ချိန်ကသူ့ကိုကုသကြပြောဆိုထားသည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကနယူးကာဆယ်မှာ, Tiote, မိမိ witchdoctors ကြည့်ရှုရန်အိုင်ဗရီကို့စ်ဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့ Magpies ပိုင်ရှင်က Mike အက်ရှလေကနေခွင့်ပြုချက်ယူအသုံးပြုခဲ့သည်။
Cheick Tiote ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -မိသားစုဘဝ
Tiotéတစ်ဦး မှစ. ဘုရားကိုကိုးကွယ်သောမူဆလင်များမိသားစုထံမှလာသည်။ အဆိုပါနယူးကာဆယ်နှင့်အင်တာဗျူးတွင် ညဦးယံအချိန် Chronicle, Tiotéသူကိုးညီအစ်ကို, ညီအစ်မခဲ့ဟုဆိုသည်။ Abdijan မှာကြီးပြင်းသူဖျောလူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်မှာမိမိလေ့လာမှုများတက် ပေး. ,
Cheick Tiote ကြီးပြင်းဘယ်မှာ
"ဘောလုံးကအမြဲငါ့ကိုဖို့အကြီးမားဆုံးအရာဖြစ်ခဲ့သည်။ Abdijan ရဲ့အဆိုးဆုံး Shanti မြို့မှာကြီးပြင်းငါလုပ်ချင်သောအရာကိုသိသည်နှင့်ဤငါ့အသက်ကိုဖြစ်သွားခဲ့တာသေချာပါစေတော်မူ၏။ သို့သော်လည်းငါသည်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြောင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်သောကြောင့်ငါကအောင်စီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြကြောင်းကိုခက်ခဲအလုပ်ပါပဲ။ "
သူဟာတစ်ချိန်ကဘောလုံးကွင်းကနေရရှိခဲ့သည့် Moni နဲ့သူ့ရဲ့ငါးညီအစ်ကိုနှမသုံးယောက်ထောက်ခံပါတယ်။
Cheick Tiote ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -relationship ဘဝ
သူကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးဇနီး, Madah နှင့်အတူကလေးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူတို့ကနယူးကာဆယ်လ်မြို့အနီး Ponteland အတွက်£ 1.5million အိမ်ကြီး၌နေ၏။
29 စက်တင်ဘာလ 2014 တွင်ကအစီရင်ခံခဲ့သည် နယူးကာဆယ် Chronicle Tioté၏မြို့တော်ထဲမှာဒုတိယဇနီး, Laeticia Doukrou, လက်ထပ်ခဲ့ကွောငျး အိုင်ဗရီကို့စ်, Abidjan.
အိမ်ထောင်ရေးရဲ့ start မတိုင်မီရာအရပ်ကိုယူခဲ့သော ရာသီဥတု. မိမိအအေးဂျင့်ဂျင်း Musampa ကား, ဒေသဆိုင်ရာသတင်းစာဖို့လက်ထပ်ထိမ်းမြားကိုအတည်ပြု "ကျွန်မသူနဲ့လက်ထပ်ကသူ၏ဒုတိယအိမ်ထောင်မင်္ဂလာကြောင်းရခဲ့ဘူးသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ "
The Sun ၏ပထမဆုံးဇနီးသူ့ကိုလက်ထပ်ခံရခြင်းနှင့်အတူ '' ပထမဦးဆုံးမှာအဆင်ပြေ '' ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံဒါပေမယ့်သူမရဲ့စကားအခိုင်အမာဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာဆက်ဆံရေးကိုချွတ်မခေါ်ရန်ဆုံးဖြတ် '' သူကငါ့အ mum, တွေ့ဆုံရန် သွား. သူတစ်ဦးအပိုဆောင်းဇနီးရရှိရန်လိုအပ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်သူမ၏မှရှင်းပြသည်။ သူကတစ်ဦးကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်ကဲ့သို့ငါ့ကိုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူကဝက် '' ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်မကြာခင်မှာပြုလုပ်သူသည်မိမိသခင်မနှင့်အတူအမှုအရာအဆုံးသတ်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်ကိုသူ Raphael ခေါ်ဆိုတော်မူသောသူ့အဘို့သူငယ်ကိုဘွားမြင်လေ၏သောသူနှင့်အတူ Nikki တောင်းဆိုခဲ့သည်။
2 မယားများနှင့်အမြှောင်ရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်သောအခါ, ဟောင်းနယူးကာဆယ်ကွင်းလယ်လူ Cheick Tiote ဟုဆိုကာအားဖြင့်သူ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့ကာကွယ်ပေးဖို့အမြန်ခဲ့သည် "မယားနှစ်ယောက်နှင့်တစ်ဦးအမြှောင်ရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ပုံမှန်မဟုတ်သောဘာမှမရှိဘူးဖြစ်၏။ "
Cheick Tiote ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -နီးပါးအကျဉ်းထောင်သို့သှားကွ၏
အောက်တိုဘာလအတွက် 2013 Tiote အတုယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပိုင်ဆိုင်နှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာသောက်သုံးရန်ဝန်ခံပြီးနောက်အကျဉ်းထောင်ကိုရှောင်ရှားဖို့ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။
သူခုနစ်လတာဆိုင်းငံ့ဝါကျနှင့်မရတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအလုပ် 180 နာရီပေးထားခဲ့သည်။ တရားသူကြီးဂျိမ်းစ် Goss Tiote, 27 သူအပြစ်ရှိကြောင်းသာရှိသောကြောင့်ထောင်ဒဏ်ရှောင်ကပြောပါတယ်။
အဆိုပါတရားသူကြီး ဟူ. သူ့ကိုပယ်ကြကုန်အံ့: '' ငါသည်သင်တို့၏စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအခွက်တဆယ်ကို အသုံးပြု. သင်သည်ထိုသူတို့အားပေးအားမြှောက်နှင့်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်ကြောင်းလမ်းဖြတ်သန်းနေဖြင့်ရပ်ရွာထဲတွင်အခြားသူများကိုကူညီနိုင်ပါလိမ့်မည်, ထိုမျှသံသယရှိသည်။ ''
Cheick Tiote ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဖက်ရှင်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ဆိုင်
ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 ခုနှစ်, Tiotéဒီဇိုင်နာက Yusuf Abubakar, သူ့အဘို့ကစီမံခန့်ခွဲသူတစ်ဦးနိုင်ဂျီးရီးယားနှင့်အတူသူသည်နေကြပါပြီဟုခေါ်တွင်ထားတဲ့ယောက်ျားရဲ့ဖက်ရှင်လိုင်း၏စီးရီးစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
Akubakar အဆိုအရ; "Tiote တစ်ကယ့်ကိုကောင်းတဲ့နှင့်မြေကြီးကောင်လေးဆင်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါသူ့ကိုတွေ့သောအခါငါတကယ်လှုပ်ခတ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကယ့်ကိုဖော်ရွေခဲ့ပါသည်။ သူကမကြာခဏငါသူ့အောက်၌အလုပ်လုပ်ပင်ကိုယျတျောသသူဌေးကငါ့ကိုရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ငါမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကိုသူ့အဘို့အလုပ်လုပ်ကိုင်ရှာဖွေပါ။ သူကငါဆိုသည်ကားအဘယျသို့ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ကြာမြင့်ကကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။ "
Cheick Tiote ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -အနှစ်ချုပ်အတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး
သူအိုင်ဗရီကို့စ်အသေးစားလိဂ်ခြမ်း FC အသင်း Bibo နဲ့သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ခဲ့သည်။ 2005 မှာတော့သူဟာသူတို့ Geel မှဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်ဘယ်လ်ဂျီယံဖလားပွဲစဉ်အတွက် Anderlecht သူ့ရဲ့ပွဲဦးထွက်ကိုဖန်ဆင်းပေးသောပြီးနောက်ဘယ်လ်ဂျီယံကလပ် Anderlecht အားဖြင့် scouted ခဲ့သည်။ Roda JC ထွ-FC အသင်း Bibo နှင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ဖီယင်နုအသင်းရဲ့ Sekou Cisséအတူတက် join ဖို့အတှကျ 2007-08 ရာသီမှာတော့သူဟာချေးငွေအပေါ်ကစားခဲ့ပါတယ်။2တွင်အောက်တိုဘာလ 2008 Cheick Tioté€ 750,000 န်းကျင်ဖြစ်သတင်းပို့နေတဲ့အခကြေးငွေဘို့ဒတျချြ Eredivisie လိဂ်ခြမ်း FC အသင်း Twents များအတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သူ 2009 / 10 ရာသီအတွက်ဒတ်ခ်ခေါင်းစဉ်ဖြင့်အနိုင်ရခဲ့သည်ကိုလည်းယူရိုပါလိဂ်နှင့်ချန်ပီယံလိဂ်အတွက် featured ။ Tioté£ 26 သန်း၏တစ်ဦးအခကြေးငွေများအတွက် 2010 သြဂုတ်လ 3.5 အပေါ်အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ဘက်နယူးကာဆယ်ယူနိုက်တက်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
Cheick Tiote ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -LifeBogger အဆင့်
ကျနော်တို့နှောင်းပိုင်းခက်ခဲတဲ့-ကောင်လေး Tiote ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေ့ရမယ်။
က Nicolas Pepe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Serge Aurier ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဆော်လမွန်ကာလူးအဖြစ်အတွဲကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Didier ဒရော့ဘာကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်